(*) Chinese Messages Year New 2017 [Cusub] (*) Chinese Messages Year New 2017 [Cusub]
(*) Chinese Messages Year New 2017 [Cusub]
farriimo cusub sanad Chinese waxaa marnaba ka baxday jidka oo aan u maleeyay in ay la yimaadaan Sannadka Cusub ee Shiinaha 2017 fariins loogu talo galay oo kaliya aad u. Waxaan rajeynaynaa in aan qaaraan aad u 2017 farriimo cusub sanad Chinese.
Happy New Year Chinese 2017 Messages
Happy Sannadka Cusub ee Shiinaha uu rabo farriimaha
Mahadi in aad arki karin Year New a in noloshaada mar kale. Baro ka duleella ee la soo dhaafay, oo waxay qaadan on dunida in jinniyadu ay sare!
farriimo cusub sanad Chinese
Ka hor qorrax ka soo baxa ee qorraxda ugu horeysay ee 2017, i sii daa aan rinji oo dhan rays ee Barakooyinka guul iyo farxad aad u. Halkan ka aad raba ah Year New cajiib ah!
farriimo Chinese sanadka cusub u bixiyo saaxiibbadiis
Year New Tani waxaan jeclaan lahaa in:
Masiirka marna waxaad qaadataa masaafo ku socoto;
Cupid idinka dharbaaxo isagoo arrow sweetest;
Lady nasiib Arzaaqaa dul aad caafimaad iyo hanti;
Your Guardian Angel haynayaa heegan maskaxda iyo dhalaalaya.
Aad Happy iyo Year New barakaysan
2017 farriimo cusub sanad Chinese
maalmood noqon karaa sida glittery sida Diamonds;
saaxiibbadaa noqon karaa sida ugu fiican ee Gold;
Waxaa laga yaabaa in aad qalbiga ka sii joogo sida cagaaran sida sumurud;
Iyo naftaada hadhaan sida saafi ah sida Pearl.
Sanadka Cusub beddesho laga yaabaa in aad:
ilmada Your Farxadda
qorshayaasha Your ficil
riyooyin Your xaqiiqada galay
kaydka Your galay hantida
Your caashaqa ugu soo galay wadajir
Oo Dhacdooyin aad galay dalal!
A Year New aad u faraxsan
Xilkan fariimaha Xai Fa 2017
Hooyo & Aabaha .... Waad ku mahadsan tahay Me Keenida in Your Life iyo Had iyo jeer beenta Khaladaadka My & Weli Me Taageeridda in wax kasta oo i Ma. Waxaad Mar walba jeclaada. Happy New Year My kufaraxsanahay Waalidiinta.
2017 abaalmarinta fariimaha fa xi cái
Ilaah ha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya samada,
Yaa ku yidhi ninkii Wiilkiisa siiyey;
Iyadoo Malaa'igta gabyi farxad curdan,
Sannad ka farxi cusub ee dhulka oo dhan!
farriimaha sannad cusub ee Shiinaha
fariin Whatsapp sanadka cusub ee Shiinaha
May dhan ilbiriqsi ah, daqiiqo, saacadood, maalmood, todobaad iyo bilood ee sannadka cusub waxa aad keeni farxad iyo nasiib weyn! Happy New Year!
2017 fariin cusub sanad Shiinaha
Sida aan ka gali baxay sanadkii hore iyo sanadkan gasho, Waxaan idiin soo diri aad tiiraanyo leh uu rabo ka buuxa jacaylka, nasiib, farxad iyo rayraynta. Happy New Year!
sanad cusub Chinese 2017 fariin
Aynu ka dhigi our xal New Year inaan halkaas for kasta oo kale oo ku caawin aadanaha walaalahooda u baahan xitaa haddii iyaga ku garanaysaan waxaan aadan shakhsi ahaan. Sidaas daraaddeed waxaa iman doona ha qaar ka mid ah naxariis iyo Kalsoonaada ayaa ku faafay!
fariin Funny Sannadka Cusub ee Shiinaha
brand cusub sanad kale oo halkan waa sidaas nasto tamartaa aad iyo aad qarka u saaran inay ku raaxaystaan. Tagina walwal dhan, shaki iyo cabsi oo kaliya raacaan siyaasadda ee qosli, jeclahay, ku nool.
fariin Shiinaha sanadka cusub walaal
sanadka ha sii dhalaal badan hal tegey; Ciqaahtii in wanaag iyo ladnaanta; Naciimo iyo hadiyadaha.
fariin Shiinaha sanadka cusub ee qoyska
Salaamaha Year New Happy Friends si oo dhan!
Mar walba Iska nabad kula deriskaaga iyo qaraabada,
At dagaal kula mada iyo qaladaadkeyga aad,
Oo ha Year kasta New waxaad ka heli qof wanaagsan!
aad raba Year aad u faraxsan New!
Baadhid: Chinese sanadka cusub 2017 Rajo
Sannadka Cusub ee Shiinaha 2017 fariimaha wanaagsan
aad doonaya wax walba oo wanaagsan oo ku saabsan sanadka cusub this!
Ku raaxeyso, farxad, nabadda, jeclahay, daryeelka, nasiib iyo guulo hor!
sanad cusub funny Shiinaha 2017 farriimo
Waxaa laga yaabaa in aad sanad weyn oo farxad wayn iyo nasiib buuxiyeen! Joog caafimaad wanaagsan iyo gaaraan meel ka mid ah guul. aad raba sano cajiib ah ka hor!
Chinese fariin sanadka cusub image
Sida aan ka fekero our saaxiibtinimo iyo sida faraxsan waxa uu iga dhigay, Waxaan doonayaa in aan aad rabtid farxad sannaddii inuu yimaado.
The Chinese fariimaha New sano 2017 socdo sidoo kale ugu dhakhsaha badan, waxaana jeclaan lahaa inaan arko waxa ay maskaxda for this sanadka cusub ee Shiinaha. Ha noo soo sheeg waxa aad ku hayaa this sanad cusub Chinese 2017 fariin. farriimo xilkan Xi Fa cái 2017 ayaa curated kaliya aad u.